ဝိညာဉ်ပကတိ၏ အကျိုးမူကား.. ချစ်ခြင်း၊ ၀မ်းမြောက်ခြင်...
ခရစ်ယာန်ဓမ္မပညာရှင် Thomas Aquinas က ခရစ်ယာန်တို့၏ ချိုးခြံခြင်းသဘောကို အထူးကောင်းမြတ်သော ကိုယ်ကျင့်တရား ဟုခေါ်ကာ အားပေးခဲ့သည်။ မိမိကိုယ်မိမိ ချုပ်တည်းချိုးခြံခြင်းက ဘ၀အသက်တာ ကဏ္ဍအသီးသီးကို လွှမ်းမိုးသွားသင့်သည်။
ယုံကြည်သူများအတွက် ခြိုးခြံခြင်းသဘောကို လူစိတ်စွမ်းအားနှင့် မထိမ်းချုပ်နိုင်ပါ။ မိမိကိုယ်ကို ချုပ်တည်းခြင်းသဘောကို ပေးသနားသည့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှ ရရှိသည်။ ၄င်းသည် ၀ိညာဉ်ဆုကျေးဇူးတစ်ပါးဖြစ်သည်။ ၀ိညာဉ်ပကတိ၏ အကျိုးမူကား ... ကာမဂုဏ်ချုပ်တည်းခြင်း ပေတည်း ..၊ ကလ ၅း၂၂-၂၃
To address this problem, theologian Thomas Aquinas uplifted the Christian character quality of temperance, calling it “a special virtue.” He saw how self-restraint should extend to all areas of life.
For the believer, temperance, or moderation, does not derive from sheer human willpower. Instead, it comes from the Holy Spirit who gives us self-control: “The fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control” (Gal. 5:22-23).
ODB 9-Nov-2010 @ http://odb.org